को हुन् भावना श्रेष्ठ काठमाडौमा एक अर्ब २० करोड रूपैयाँमा जग्गा किन्ने ? — Imandarmedia.com
को हुन् भावना श्रेष्ठ काठमाडौमा एक अर्ब २० करोड रूपैयाँमा जग्गा किन्ने ?
एनसेलमा सुनिभेराको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ भने बाँकी ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको टेलिकम कम्पनी एक्जियटासँग रहेको छ । श्रेष्ठका श्रीमान् सतीशलाल आचार्य नेपालको टेलिकम क्षेत्रका एक चर्चित नाम हो । आचार्यले नेपालको आफ्नो अधिकांश व्यापार श्रीमती भावनाको नामबाट सञ्चालन गर्दै आएका छन् । ताहाचलमा माइती भएकी श्रेष्ठले काठमाडौं मनपा–३ का सोनिला मल्ल शाह, धनेन्द्रबहादुर शाह र नभेन्द्रबहादुर शाह समेतबाट छुट्टाछुट्टै ८ कित्ता जग्गा खरिद गरेकी हुन् ।
श्रेष्ठले किनेको जग्गाको दस्तुरमात्रै थैली अंकको ५ प्रतिशतका दरले ६ करोड रूपैयाँ हुन्छ । त्यसै गरि बागमती सभ्यता कोषमा ०.५ प्रतिशत अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने भएकाले उनले थप ६० लाख रूपैयाँ कर तिरेकी हुन् । दुवै कर गरि ६ करोड ६० लाख रूपैयाँ राज्यलाई मात्रै लाभ भएको छ । बिक्रेताले सरकारलाई पुँजीगत लाभकर एक करोड ६८ लाख रुपैयाँ बुझाएका छन् । ताहाचलमा माइती भएकी श्रेष्ठ सिंगापुरको पीआर होल्डरसमेत भएको बताइएको छ ।